COLAADA BARIGI WAY BOODAA OO WAY KACAAN HADDANA ERGADA WAY YEELAAN XAAJI CABDI | Toggaherer's Weblog
CIIDAMADA AMNIGA GOBOLKA TOGDHEER IYO TAAGEERAYAASHA KULMIYE EE TOGDHEER OO ISKU DHACAY
Posted by: toggaherer on: April 12, 2009
Xukuumadana Waxaan Leeyahay Dhaq-dhaqaaqa U Deg-dega Shaqadiina Korodhsiimo Dambe Ma Jirto, Loo Noqon Maayo Siday Aniga Caqligayga Tahay”. sidaas waxa yidhi Xaaji CabdiKariim Xuseen Yuusuf Cabdi waraabe.
oo ka tirsan Mudaneyaasha Golaha Guurtida Somaliland waxanu daboolka ka qaaday inaanay jiri doonin muddo kordhin dambe, waxaanu xukuumada ugu baaqay inay dhaq-dhaqaaq samayso si doorashooyinku u qabsoomaan.
Xaaji Cabdi Xuseen wuxuu difaacay Go’aankii muddo kordhinta Golaha Guurtidu ay muddada lixda bilood ah u sameeyeen Madaxweynaha Somaliland iyo ku xigeenkiisa, waxaanu sheegay inay arrintaasi dhamaatay oo komishinka doorashooyinka iyo Madaxweyne Rayaaleba ay saxeexeen digreetadii cayimaada doorashada Madaxtooyada Somaliland.
Xaaji Cabdi Waraabe, waxa kale oo uu soo dhaweeyay hadalkii Suldaan Maxamed Suldaan C/qaadir ku sheegay inay beeshoodu eeganayso beeshii samaysa wax ka baxsan sharciga oo baxda, waxaanu ku sifeeyay hadal munaasib ahaa balse aan dow ku ahayn inuu ka soo baxo Afka Suldaanka.
Mudne Xaaji Cabdi Waraabe, wuxuu sidaasi ku sheegay waraysi ay maanta saaxafada Somaliland kula yeelatay Magaalada Hargeysa, waxa kale oo uu baaq nabadeed u soo jeediyay labadii beelood ee dhawaan ku dagaalay deegaanka Ceel-bardaalle ee u dhaxeeya Gobolada Gabilay iyo Awdal, waxaanu waxgaradka iyo bulshada labadaasi ardaa ee walaalaha ah u soo jeediyay inay joojiyaan dagaalka isla markaana ay aqbalaan ergada dhex dhexaadinta.
Waraysigaasina wuxuu u dhacay Sidan:-
S: Xaalada Dalka ka waran siddaad u aragtid?
J: Xaalada dalka si wanaagsan ayaaan u arkaa, dalkan Somaliland aad buu u wanaagsan yahay xagayga, waxa adduunka ka joogta ama Afrika aad baynu u wanaagsan nahay.
S: Waxa dalka ka jiray muran siyaasadeed oo waliba ka dhashay go’aankii aad idinku gaadheen Guurti ahaan, maxaad Arrintaas ka odhan lahayd?
J: Maxaan ka odhan lahaa way wanaagsanaanaysaa way dhammaatay, qoladaa Xisbiyada ahna waxaan ku wacdiyayaa inaan dal fudud la ina moodine’e, oo cadowgu ina soo dhex geline’e komishinkii doorashooyinka, Madaxweynihii iyo Guurtidiiba way saxeexday xiliga doorashada loo noqon maayo korodhsiiyo dambe ee ogolaada sidaas.xukuumadana waxaan leeyahay dhaq-dhaqaaq u deg-dega shaqadiina korodhsiimo dambe ma jirto, loo noqon maayo siday Aniga caqligayga tahay.
Shaqada ha lagu deg-dego oo cida shaqada leh ee komishinka doorashooyinka ahi, xukuumada ahi nidaamkii doorashada loo gelayay yay dhabaqaynine’e, oo yaanay mar dambe soo celin haleeli waynayaye’e. ha ku degdegeen nidaamkii oo doorashada hal la galo.
Qolyaha Xisbiyada mucaaridka ahna waxaan leeyahay Dhaqdhaqaaq haddii uu yimaado xisbi jiri maayo, masaajid jiro maayo, agoomahaa iyo dhab-dhabkaa iyo xukuumadaa cadowga badan leh, codow ha inoo jabine’e ragii dawlada dhisaad tihiin, raggii soo halgamay ayaad tihiin, ragii ku soo tabcay ayaad tihiin. Waxaan idin leeyahay maanta tanaasula qoloba maalin bay tanaasushaaye’e, tanaasulka maanta idinkaa leh ee aqbala.
S: Xaaji Cabdi, maxaad iyada ka odhan lahayd, xiisada iyo dagaalka ka dhacay deegaanka Ceel-bardaalle ee u dhaxaysa Gobolada Awdal iyo Gabilay?
J: Labadaas beelood ee wada yaala ee walaalaha ah, taasi oo kale way ku soo raagtay adduunka, Burco ayaa caynkaas ahayd, Awaare ayaa waligeed cimrigeed sidaasi ahayd, lama kala tagaayo aakhirka waa la walaaloobaa, waxaan leeyahay wali xaalkiinu wuu dhow yahay ee ergada maqla oo joojiya colaada, oo dadtiina dadka wada yeela.
Dhulka lama kala laha, Barkad, Beer iyo Daar ninkii lehbaa leh, xadka magaalaba inay in cashuurta ka qaadato ayaa loo xaddaynayaa, Saaka ninka Sallaxlay Daar ka dhisanaya ama Barkad ka qodanaya ee reer Boorame ah ama reer gabilay ah durbaan baa loo tumayaa.
Inan iyo Abtigii ayaad tihiin, inan iyo Seedigii ayaad tihiin, Awow baynu isku wada nahay Walaalayaal nacabka ha inoo jabinina shaydaan ayaanu idinka sayid calayn. Ergada yeela.
Colaada Bariga way boodaa oo way kacaan haddana Ergada way yeelaan, waad ogaydeen Daroor wixii ka dhacay ee 200 oo qof dad ku dhowi ay wax ku noqdeen, haddaana daqiiqad ayaa laga walaaloobay oo cid hadal hayaa ma jiro. Galbeedkuse beerlaydu hiin baati hibatayn xun baad leedihiin oo nin baa barri la dilay baad ku baaba’daan, ergadana qumaati uma qaadataan ergada qaata.
Guurtida maqla culimaddiina maqla joojiya ceebtaa aydaan meel u kala kacayn cimrigiina waad wada joogaysaan markii horena waad wada joogteen imikana waad wada joogaysaan.waxaan idin leeyahay qoriga dhiga.
S: Xaaji Cabdi maxaad ku micneynaysaa oo aad u aragtaa hadal ka soo yeedhay Suldaan Maxamed Suldaan C/Qaadir, oo dareen badan keenay oo uu ku qod-qoday dagaalkii sokeeye?
J: Hadal uurkiisa ku jiray ayuu yidhi Suldaanku nin kale inuu yidhaahdo ayay ahayde’e, inuu isagu yidhaahdo may ahayn. kolkii ay boodeen Garxajisku waa tii loo dhammaaday, waa tii la jilciyay Aniga ayaa dagaalka halkan kaga jiray, oo waa ogyihiin C/raxmaan Aw- Cali Faarax iyo Muuse Biixi umaan nixin halkaa kaga dhufta sidaas yeela ayaan lahaa, xabbada iyo Arrinka arrinka ayaa weyn.
Suldaanku run buu sheegay oo waa tii nala wada dilaye, haddii aan reerkaas nahay reerka baxa waanu eeganaynaa ayuu yidhi Suldaanku. Waa hadal munaasib ah oo uurkooda ku jira laakiin afka Suldaanka inay ka soo baxdaa dow may ahayn.